STAAD - mamorona endrika famolavolana lafo mahomby izay mahazaka fihenjanana ara-drafitra - India Andrefana - Geofumadas
Aogositra, 2019 Engineering, fanavaozana, Microstation-Bentley
Miorina ao amin'ny toeran'ny Sarabhai, K10 Grand dia trano biraon'ny mpisava lalana izay mamaritra ny fenitra vaovao ho an'ny sehatra ara-barotra any Vadodara, Gujarat, India. Nisedra fitomboana haingana ny trano ara-barotra ny faritra noho ny nanakaiky azy teo amin'ny seranam-piaramanidina eo an-toerana sy ny toby fiaran-dalamby. K10 dia nanakarama VYOM consultant ho mpanolotsaina ara-stratejika amin'ilay tetik'asa ary nirahin'izy ireo hamolavola tranobe mifanena ary mihoatra ny fanantenan'ny orinasa Vadodara ambony indrindra.
Ity tetikasa INR 1.2 miliara ity dia ahitana ny gorodona ambanin'ny tany sy ny 12, misy faritra 200,000 metatra toradroa. Ny ankabeazan'ireo trano eo amin'ny faritra dia mifangaro, misy ny biraon'ny birao ambonin'ireo orinasa hafa. Na izany aza, ny K10 dia te-hitondra zavatra vaovao any amin'ny faritra, ka ny K10 Grand dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny birao ihany. Ity fanitsiana ity dia hametra ny fanelingelenana ny fiainam-birao ho an'ny mponina.
Fandresena ny olana momba ny famoronana hamoronana toerana malalaka tsanganana
Mba hamolavolana io rafi-dàlana mahavariana io dia nila nandresy ny fanamby maro i VYOM. Noho ny fisandratan'ny trano sy ny fananganana trano maritrano momba ny trano dia nisy olana tamin'ny famolavolana ilay rafi-pitantanana izay ilaina amin'ny fandaminana. Ny ekipa tetikasa dia te-hamorona trano misy tilikambo telo ary tranobe afovoany. Mivoatra mankany ivelany ny firafitry ny rihana enina ambany ary mihodina miakatra ho an'ny rihana enina amboniny. Ny fandaminana ireo tsanganana sy ny rindrina nanapaka dia sarotra noho ity endrika miavaka ity. Ankoatr'izay, ny maritrano sy ny mpamorona dia nanizingizina ny hanana toerana malalaka tsanganana amin'ny efitrano fidirana. Ny foibe afovoany dia mila mametraka ny serivisy rehetra ho an'ny daholobe, ary sarotra ny manana endrika famoronana horohorontany satria ny endrika ny tranobe dia nahasarika hery kokoa taty aoriana. Farany, ny fototry ny tranobe dia nitambatra sy rakitry ny tranobe, noho izany dia ilaina ny manombatombana tsara ny rafitra alohan'ny fananganana. Amin'izao fotoana izao amin'ny sehatry ny fananganana, dia antenaina ho toerana lehibe ho an'ny faritra ny tranobe.
Ny fifandraisana fifandraisana ho an'ny famolavola ara-toekarena kokoa
Rehefa mamolavola ny tranobe, ny drafitra tany am-boalohany dia ny hamorona trano efatra misaraka: tilikambo telo ary rafitra afovoany. Saingy rehefa nanomboka namakafaka ny famolavolana tao STAAD i VYOM, dia nahatsapa ny ekipa tetikasa fa tsy ekonomika io volavolan-tsindrim-bokatra tany am-boalohany io. Ho solon'izay dia nampiasa STAAD ny ekipa hamorona famolavolana vaovao sy namboarina ho tombony kokoa. Ny ekipa tetikasa dia nanapa-kevitra ny hampifandray ireo trano rehetra, manangona vola sy fotoana. Tena zava-dehibe ho an'ny ekipa ny hanao izany fanovana izany alohan'ny fivoaran'ny fananganana.
Miaraka amin'io famolavolana io dia nanapa-kevitra ny VYOM ny toerana hametrahana ny andry fanohanana struktural. Nasehon'ny STAAD tamin'ny ekipan'ny tetikasa fa ny halavan'ny tohodan-tsambo dia miorina amin'ny gorodona fahasivy ho ambony ka mahatonga tsanganana mahitsy mahazatra satria tsy mety hiampita ilay drafitry ny trano izy ireo. Tsy ho niasa na ny andiam-paty satria mety ho nampidina ny valin-drihana izy ireo ary nanimba ny drafitry ny birao. Fa kosa, ny VYOM dia nanolotra tsanganana mahitsy ho an'ny gorodona sivy voalohany ary tsanganana miainga avy amin'ny fahasivy ka hatramin'ny roapolo ambaratonga faharoa. Ity drafitra ity dia mihazona ny maritrano raha mbola mijanona ao anatin'ny takian'ny fehezan-dalàna IS.
Fametrahana ireo tsaramaso sy tsanganana mba hampitoviana ny fifamoivoizana
Ny endri-javatra iray hafa izay nanampy ny VYOM hamorona sehatra tsy manam-paharoa dia ny fampiasana ireo vakana mifampitohy. Tsy mety ho lalina ny sakay, satria ny mpanao maritrano dia maniry ny kofehy avo indrindra azo atao. Ankoatr'izay, ny drafitra dia nitaky ny hampiasana ny tohodrano amin'ny seho. Ireo vakana ireo, miaraka amina tsanganana sy rindrina manapaka, manakana ny fihenanana ao anaty trano, mamela ny afovoan'ny faobe sy ny hamafin'ny masony. VYOM dia nandamina ireo tsanganana mba hipetrahana tanteraka ny afovoany ao afovoan-trano. Ny rindrina rehetra nanapaka, rindrina manangana sy tsanganana dia nalamina mba hahafahan'izy ireo mahatohitra ny 70% amin'ny hery manaraka. Mba hanomezana toerana malalaka andiany any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, VYOM dia nanipy hazo ary cantilever slants 20 tongotra ho an'ny sisa taorinan'ny trano.
Tamin'ny fampiasana STAAD, dia nahatsapa i VYOM fa mbola misy faritra volavolan-dalàna ambony ao amin'ilay trano. Ity faritra ity dia niseho tamin'ny rihana fahasivy noho ny elanelana misy tsanganana fanasokajiana. Ny tany fahasivy dia mitondra enta-mavesatra be, hany ka ilaina ny hanitsiana ny famolavolana. Vantany vao nahatsapa izany toe-javatra izany ny ekipan'ny tetikasa dia nahavita nanala ny hery fitarihana lavitra ireo andramena teny amin'ny rihana fahasivy ny mpikamban'ny ekipa niaraka tamin'ny fanamafisana ary ny tariby napetraka tamin'ny sezakelaka mitovy.
Manavotra fotoana fandrafetana ho an'ny toeram-piasana amin'ny ho avy
Tamin'ny fampiasana STAAD, VYOM dia nahavita ny famoronana trano manontolo miaraka amina sary hosodoko iray volana. STAAD no namonjy ny ekipa tetikasa nandritra ny fotoana marobe nandritra ny sehatry ny famolavolana, izay nahafahan'ny 70 fandaharana famolavolana natao ho an'ny drafitra roa sy ny famolavolana farany ao anatin'ny volana. STAAD mampihena ny fotoana ilaina amin'ny famolavolana sy famakafakana ireo fandinihana ireo. Ny fampiharana dia namela ireo fanovana sy ny endrika fanovana ireo mba hanaraka ny kaody IS ao anaty tontolo mora ampiasaina.
Ny drafitra dia nahafeno ny fepetra rehetra an'ny tranombakoka sy ny mpamorona, miaraka amin'ny fananganana ankehitriny. Ny tranobe efa niandry ela dia toa mitovy amin'ny modely 3D, ary ny sehatra ara-barotra dia ilaina ary tsy misy sakana. Mipetraka ao afovoan-tanàna, ny K10 Grand dia ahafahan'ny mpahazo ireo manana ny zavatra ilainy eo akaikiny, ao anatin'izany ny foibe fivarotana, hopitaly, toeram-pivarotana ary trano fisakafoanana. Ny habaka dia hipetraka amin'ny zoron'ny efitrano fandraisam-bahiny, sehatra ifampizarana fihaonana, efitrano fandraisam-bahiny iray, efitrano fandraisam-bahiny ary efitrano fisakafoanana, izay hahatonga azy io ho toeram-piasana amin'ny ho avy.
Ny tetik'asa K10 Grand dia voafidy ho tompon'andraikitra amin'ny taona 2018 Year Program Infrastructure Awards ao amin'ny sokajy "Engineering struktural".
Mikasika ny lova, amin'ity taona ity, ireo fikambanana manaraka dia tonga hatrany amin'ny lisitry ny finalisin'ny taona ao amin'ny Programme 2019 Infrastructure Award eo amin'ny sokajy "Matihanina Struktural".
FG Consultoria Empresarial ho an'ny foiben'ny Patrimonium vaovao, izay tanterahana 100% amin'ny famolavolana struktural BIM, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brezila
Sterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd. Ho an'ny Ivotoerana Fampirantiana & Fampirantiana Iraisampirenena Dhirubhai Ambani, Mumbai, Maharashtra, India
WSP amin'ny fandefasana volavolan-drafitra azo antoka ho an'ny lakaly sarotra iray eo ambanin'ny kisary Admiralty Arch, London, UK
Nataon'i Shimonti Paul
Previous Post«Previous Ahoana ny fomba hananganana tranobe 3D ao amin'ny Google Earth
Next Post Tsy misy faritra jamba intsony miaraka amin'ny asanymanaraka »